Chipatara Chinoraswa Maketeni, Anoraswa Maketeni - Tianfeng
Suzhou Tianfeng Environmental Zvinhu, yakatangwa muna 2008, iri nzwisisika zvebhizimisi
chemhando yepamusoro chipatara chinoraswa nemaketeni nekugona kwekutsvaga uye kusimudzira, dhizaini uye kugadzira.
Zvigadzirwa zvedu zvinosanganisira zviyero zvinoraswa, machira emaketeni nemaketeni akadhindwa.
keteni inogadzirwa kubva ku100% polypropylene iyo ine imwe yemhedzisiro yekukanganisa kwenzvimbo yechinhu chero chipi zvacho - chakagadzirwa kana chinoshandurwa.
Anoraswa machira evana
Maketeni edu anoraswa ari kuwedzera nzira iyo zvipatara zvinoshandisa maitiro avo ekuchenesa uye chitarisiko.
Disposable pajira riya machira
Disposable keteni zvikorekedzo
Suzhou Tianfeng Environmental Materials Technology, yakasimbiswa muna 2008, ibasa rakazara rinoongorora machira emhando yepamusoro ekurapa maketeni nekugona kwekutsvagisa nekusimudzira, dhizaini uye zvigadzirwa.zvigadzirwa zvedu zvinosanganisira machira anoraswa akaenzana, machira emaketeni uye machira akadhindwa. Zvese zvine zvikorekedzo uye kupisa-chinyorwa chakabatanidzwa.
Chizvarwa chedu chitsva chakaraswa maketeni akagadzirirwa kutsiva aivapo anoshandiswazve uye anogezwa maketeni nemari yakakosha yekuchengetedza pamwe nekuvandudza hutachiona hutachiona.
Isu tiri inotungamira inoshanda hutachiona hwekudzivirira nyanzvi, anti-bhakitiriya uye murazvo-unodzosera chipatara machira anoraswa ekugadzira.
Yakaratidza kusangana nematanho epasi rese eanti-bhakitiriya uye murazvo unodzora
Yakakosha mari yekuchengetedza pamwe nekuvandudza hutachiona
Independent Anti-kwemabhakitiriya dzaFord
Yakagadzirwa kubva ku100% polypropylene isina-yakarukwa machira